चेन्नई सुपर किंग्सको विरुद्द दिल्ली डेयरडेभिल्स भिड्दै, सन्दीपले खेल्ने सम्भावना कती ?::Digital News Paper
चेन्नई सुपर किंग्सको विरुद्द दिल्ली डेयरडेभिल्स भिड्दै, सन्दीपले खेल्ने सम्भावना कती ?
चेन्नई सुपर किंग्स र दिल्ली डेयरडेभिल्सबीच भारतमा जारी क्लब क्रिकेटको सबैभन्दा ठूलो प्रतियोगिता इण्डियन प्रिमियर लिग (आइपीएल) मा शुक्रबार (आज) को एकमात्र खेलमा प्रतिस्पर्धा हुँदैछ।
नेपाली समयअनुसार बेलुकी ८ः१५ मा सुरु हुने खेल दिल्लीको घरेलु मैदान फिरोज शाह कोट्ला मैदानमा अंक तालिकाको दोस्रो स्थानमा रहेको चन्नईले पुछारको दिल्लीसँग खेल्न लागेको हो।
नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका १७ वर्षीय लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने चेन्नईसँगको आजको खेलमा खेल्ने सम्भावना प्रभल देखिएको छ। अघिल्लो खेलमा रोयल च्यालेन्जर्स बेंग्लोरविरुद्धको खेलमा डेब्यु गरेका सन्दीपले पहिलो खेलमै राम्रो छाप छोडिसकेका छन्।
सन्दीपले बेंग्लोरसँगको खेलमा पूरै ४ ओभर बलिङ गर्दै २५ रन खर्चेर १ विकेट झारेका थिए। सो खेलमा विश्वका चर्चित ब्याट्सम्यान बिराट कोहली र एबी डी भिलिसर्य सन्दीपको बलमा खुलेर खेल्न सकेका थिएनन्। त्यसैले बैंग्लोरविरुद्ध गरेको राम्रो प्रदर्शनपछि उनले फेरी टोलीमा स्थान बनाउने लगभग पक्का रहेको छ।
सन्दीपसँगै अघिल्लो खेलमा डेब्यु गरेका दक्षिण अफ्रिकाका जुनियर डालाले ३ ओभरमा ३४ रन खर्चिएकाले सन्दीपको सम्भावना धेरै देखिन्छ। प्रत्येक टोलीले ४ जना विदेशी खेलाडी खेलाउन पाउनेछन्। ग्लेन म्याक्सवेल पनि फर्ममा नरहेकाले सन्दीपले खेल्ने सुनिश्चित देखिएको छ।
आजको खेलमा सन्दीपले बलिङ गर्न पाए उनले भारतीय टोलीका पूर्व कप्तान महेन्द्र सिंह धोनी, शेन वाट्सन र सुरेश रैनाजस्ता खेलाडीसामु बलिङ गर्न पाउने छन्। सन्दीपलाई दिल्लीले २० लाख भारतीय रुपैयाँमा टोलीमा अनुबन्धीत गरेको हो।